Sarinà prototype iPad iray mampiseho fa nisy mpampifandray roa | Vaovao IPhone
Toni Cortés | 29/03/2021 20:00 | maro
Ireo orinasa fiara dia tsy manana ahiahy amin'ny fampisehoana ny azy ireo prototypes. Natolotr'izy ireo tao amin'ny foara mihitsy aza izy ireo. Izy ireo dia maodely tsy foronina velively, fa mahasarika ny sain'ny maro.
Amin'ny tsenan'ny elektronika, ohatra, ny mifanohitra amin'izany no mitranga. Tazonina mangingina ireo prototypes, ary rehefa mivoaka ny maodely farany dia rava izy ireo. Fa tsy izany foana. Ny sasany dia namoaka sarinà prototype an'ny iPad voalohany asehoy ny fomba nikasan'i Apple hanana mpampifandray roa. Ny iray amin'ny ilany mitsivalana, ary ny iray amin'ny mitsangana. Farany, noroahiny ilay hevitra. Mahaliana.
Ny sary navoaka tao amin'ny Twitter tamin'ity herinandro ity dia nilaza fa mampiseho prototype voalohany an'ny iPad voalohany. Hatreto, tsy zava-baovao. Fa ny fandinihana amin'ny an-tsipiriany milaza sary, dia ankasitrahana mazava tsara fa Apple dia nieritreritra ny hametraka mpampitohy roa amin'ny lafiny roa amin'ilay fitaovana.
Nozarain'ny mpampiasa tao amin'ny Twitter ireo sary Giulio Zompetti, mpanangona fitaovana Apple tsy fahita firy. Namoaka sary telo izy izay mampiseho ny prototype an'ny kinova voalohany an'ny iPad, izay misy seranana miafina ao lafiny ankavia Amin'ilay fitaovana. Ity seranana ity dia toa fampifandraisana 30-pin faharoa fotsiny.
Auction amin'ny eBay
Seranan-tsambo eo amin'ny iPad. Hevitra iray izay voaroaka tamin'ny farany.
Ny iray amin'ireny prototypes ireny dia natao lavanty tany eBay tamin'ny 2012, ary ny tatitra nandritra ny taona maro dia nanondro izany Steve Jobs Nesoriny ny hevitra mpampitohy indroa amin'ny dingana farany amin'ny tetikasa iPad.
Ny hevitr'ity mpampitohy indroa ity dia ny ahafahana mametaka kitendry amin'ny lafiny roa, ary amin'izany afaka mampiasa ny iPad mifandray amin'ny fitendry ao endrika sary, na endrika fizahana.
Noho ny antony tsy fantatra dia Apple ihany tamin'ny farany nanilika izany mety izany, mamela ny iPad amin'ny mpampitohy fotsiny, eo ambanin'ny bokotra fanombohana, ka manery ny mpampiasa hiasa amin'ny klavier mifandray amin'ny endrika mitsangana.
Amin'izao fotoana izao, Apple dia nandray ny vahaolana Smart Connector, izay ampiasaina hampiasa herinaratra sy hifandray amin'ny Smart Keyboard sy Magic Keyboard amin'ny maodim-paritra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » maro » Sarin'ny iPad prototype mampiseho fa nisy mpampitohy roa izy
Kara-majika no nahavoa ny App Store tamin'ny lalao 'The Gathering Arena'